अहिलेसम्मकै उच्च यातायात जरीवाना, यस्तो गल्ती गर्दा १ लाख ४१ हजार ७ सयको चिट काटियो ! — SuchanaKendra.Com
अहिलेसम्मकै उच्च यातायात जरीवाना, यस्तो गल्ती गर्दा १ लाख ४१ हजार ७ सयको चिट काटियो !
काठमाडौ । यातायात को बारेमा नयाँ नियमहरुको कार्यान्वयन पछि, हरेक दिन ठूलो चलानीको रिपोर्टहरु आउँछन्। पछिल्ला दिनमा मानिसहरूले हजारौं रुपैयाँको चलानी भुक्तानी गर्नुपर्‍यो। तर दिल्लीबाट एउटा सबैलाइ चकित पार्ने खबर आएको छ जसमा लाखौं रूपैयाँभन्दा बढी पैसा चलानी काटिएको छ ।
हालसम्म ३० हजार वा ५० हजार इनभ्वाइसको केस रिपोर्ट गरिएको थियो तर यसपटक एक ट्रक एक लाख ४१ हजार ७ सय रुपैयाँमा चलानी काटेको छ । खबरका अनुसर चालन दिल्ली ट्राफिक पुलिसले नभएर राज्य यातायात प्राधिकरणले काटेको थियो ।
ट्रकमा सामान ओभरलोड भएकाले ट्रकलाइ रोकिएको थियो र ट्रकको अनुसन्धानपछि चालान काटिएको थियो । चालान ५ सेप्टेम्बरमा गरिएको थियो, जुन ट्रक मालिकले ९ सेप्टेम्बरमा दिल्लीको रोहिणी अदालतमा गएको थियो । मोटर वाहन संशोधन ऐन २०१९ कार्यान्वयन भए यता धेरै यस्ता चालानका घटनाहरू भएकछन्।
ट्राफिक नियम ब्रेकरहरूले चालानको रूपमा उनिहरुको साधन किनेको पैसाको आधा वा पुरै रकम तिर्नु पर्छ । यस्र्तै घटना हरियाणाको गुरुग्राम भन्दा केहि दिन अघि भएको थियो १५ हजारको स्कूटीको चलान २३ हजार गरिएको थियो ।